नेपालबाट भारतमा हुने मानव तस्करी ५ सय प्रतिशत बढ्यो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नेपालबाट भारतमा हुने मानव तस्करी ५ सय प्रतिशत बढ्यो
Published On : १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:५३
नेपालबाट भारतमा हुने मानव तस्करी सन् २०१३ पछि ५ सय प्रतिशत बढेको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले खुलासा गरेको छ। ‘भारत-नेपाल सीमामा मानव तस्करी’ सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनमा एसएसबीले यस्तो दाबी गरेको हो। भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियाले शनिबार एसएसबीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।
नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रबाट चेलीबेटी भारतमा तस्करी गरी राजधानी दिल्ली, मुम्बई, कोलकातालगायत अन्य सहरस्थित वेश्यालयमा ५० हजार रुपैयाँसम्म बेच्ने गरेको उल्लेख छ। भारत-नेपाल सिमानामा सन् २०१३ मा १ सय ८ र सन् २०१७ मा ६ सय ७ जना यस्ता नेपाली बालबालिका र युवतीको उद्धार गरिएको पनि एसएसबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एसएसबीका अनुसार भारतमा मानव तस्करी गरी ल्याइने अधिकांश महिला र बालबालिकाको प्रमुख स्रोत नेपाल हो। यसरी भारत ल्याइने नेपाली महिला र बालबालिकालाई देह व्यापार वा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिने वा अन्य स्वरूपमा अत्यधिक श्रम शोषण गरिने पनि एसएसबीले जनाएको छ। एसएसबीका अनुसार यसरी ल्याइएका महिला तथा बालबालिकाका अवैध रूपमा अंग निकालेर बेचेका मामिला पनि फेला परेका छन्।
नेपालको महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको तथ्यांक उल्लेख गर्दै एसएसबीले नेपालका २६ जिल्लाका महिला तथा बालबालिका मानव तस्करको निसानामा रहेको जनाएको छ। तीमध्ये मानव तस्करले पहाडी जिल्लाका दलित समुदायलाई मुख्य निसाना बनाएका भए पनि माथिल्ला जातिका महिला र बालबालिका पनि भारत तस्करी गरेको पाइएको छ।
दिदी (देह व्यापारी) वा दलाल भनिने मानव तस्करले ९ देखि १६ वर्षसम्मका बालबालिका र किशोरी भारत-नेपालका सीमावर्ती सहरमा ल्याउने गर्छन्। नेपालको सीमा कटाएर उनीहरूलाई बसबाट भारतका विभिन्न सहर ल्याइने गरेको छ।
सीमावर्ती सहरमा दलालले उनीहरूलाई लोभलालच देखाएर प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँका दरले विभिन्न वेश्यालयमा बेच्ने गर्छन्। एसएसबीका अनुसार यस्ता दिदीबाहेक परिवारका सदस्यले समेत चेलीबेटी बेच्ने गरेका छन्। सीमामा प्रहरीको सोधपुछबाट जोगिन बालिका र किशोरीको वास्तविक उमेर ढाँट्ने गर्छन्।
एसएसबीका अनुसार सुरक्षा निकायलाई झुक्याउन गाउँबाट उनीहरूलाई पहिले काठमाडौं लगेर गेस्टहाउस वा कार्पेट कारखानामा राखिने र त्यहाँबाट सीमा नाकामा ल्याएर दलाललाई बेचिन्छ।
सीमा नाकाबाट दलालले उनीहरूलाई बस वा रेलबाट मुम्बई, कोलकाता, दिल्लीलगायत विभिन्न सहर ल्याएर वेश्यालयमा ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने एसएसबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश दलालले उनीहरूलाई लोकल बसबाट दिल्ली ल्याउने र यहाँबाट रेलबाट मुम्बई लैजाने गर्छन्।
एसएसबीले भारतका वेश्यालयमध्ये केही राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाले कहिल्यै पनि छापा नमारिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसरी नेपालबाट चेलीबेटी भारत तस्करी गरिने मुख्य समय जुनदेखि अगस्टसम्म वा सेप्टेम्बरको सुरु भएको पनि जनाइएको छ। दसैंताका भारतका वेश्यालयबाट दिदीहरू नेपालस्थित आफ्ना गाउँमा आउने र बालिका तथा किशोरीलाई फकाएर ल्याई वेश्यालयमा भर्ती गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।